काठमाडौँ, १७ मङ्सिर । मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले पछिल्लो दुई महिनाको अवधिमा ३१ हजार बढी कामदारको माग प्रमाणीकरण गरेको छ । दूतावासले गत असोज तेस्रो सातादेखि यही मङ्सिर १४ गतेसम्मको अवधिमा ३१ हजार २०१ श्रमिक माग भएको ९६३ मागपत्र प्रमाणीकरण गरी वैदेशिक रोजगार विभागमा सिफारिश गरेको हो । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भए..
महोत्तरी, १० मङ्सिर । उपनिर्वाचनको मिति नजिकिँदै गएपछि महोत्तरी जिल्लाको भारतीय ..
काठमाडौं, ४ मंसिर । अतिक्रमित कालापानीलगायतका क्षेत्र फिर्ता गर्ने विषयमा कूटनीत..
महोत्तरी, २७ कार्तिक । भारतीय सुरक्षाकर्मीको धम्की सहेर पनि सीमा रक्षा गर्न पाएक..
पर्सा, २४ कार्तिक । ०१६ मा नेपाल र भारतबीच २१ बुँदे गण्डक सम्झौता भएसँगै दुई देश..
जापान, ४ कार्तिक । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र जापानका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेबीच आज बिहान टोक्योस्थित आकासाका प्यालेस, स्टेट गेष्ट हाउसमा भेटवार्ता भएको छ । सो अवसरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागी, जापानका लागि नेपालका राजदूत प्रतिभा राणा, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. हरि पौडेल, राष्ट्रपतिका प..
काठमाडौं, ३० भदौं । नेपाल सरकारले उत्तर कोरियालीहरुलाई कुनै पनि व्यवसायमा लगानी गन प्रतिबन्ध लगाएको छ । सरकारले उत्तर कोरियाली नागरिकको लगानीमा सञ्चालित नौ वटा व्यवसाय बन्द गर्न दुई महिनेको समय दिएको छ । भदौ तेस्रो साताबाट लागू हुने गरी दुई महिनाभित्र अर्थात अक्टोबर मसान्तसम्म व्यवसाय बन्द वा बिक्री गरेर नेपाल छाड्न परराष्ट्र मन..
काठमाडौं, १३ भदौं । नेपाल–भारत संयुक्त सीमा बैठकले दुई देशबीचको सीमा विवाद सुल्झाउन प्रयास जारी राखेको छ । दुई देशको सीमा समस्या समाधान गर्न गठित सीमा व्यवस्थापन कार्यदलको बैठक आलोपालो गरी नेपाल र भारतमा भइरहेको छ । सोही बमोजिम यस पटक भारतमा उच्च स्तरीय बैठक बसेको हो । गत वर्ष यस्तो बैठक नेपालमा बसेको थियो । […]
काठमाडौं, ९ भदौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियाविरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी कार्यान्वयन गर्न नेपाल अग्रसर देखिएको छ । यससँगै उत्तर कोरियाली नागरिक आफ्नो लगानीमा सञ्चालित कम्पनी बन्द गरी प्योङयाङ फर्किन थालेका छन् । राष्ट्रसंघ मुख्यालयले डेढ महिनाअघि नाकाबन्दी पूर्णरूपले कार्यान्वयन गर्न सदस्यराष्ट्रलाई पत्राचार गरेको थियो । त्य..
काठमाडौं ५ भदौ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र भारतीय विदेशमन्त्री एस। जयशंकरबीच भेटवार्ता हुँदै छ । नेपाल(भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएका जयशंकरले बिहीबार बिहान १० बजे राष्ट्रपतिलाई भेट्न लागेका हुन् । त्यसअघि जयशंकरले पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजाआजा गर्नेछन् ।
काठमाडौं, ४ भदौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच दिउँसो भेटवार्ता भएको छ । बुधबार काठमाडौं आएका भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकर नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन काठमाडौं आएका हुन् ।
नेपाल-भारत संयुक्त बैठक बुधबारबाट, जयशङ्कर नेपाल आउँदै
काठमाडौं, २ भदौं । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौँ बैठक आउँदो बुधबारदेखि नेपालको राजधानी काठमाडौंमा हुने भएको छ । बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेशमन्त्री डा. सुब्रह्मण्यम जयशङ्कर बुधबार नै नेपाल आउँदै छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालमा विदेशमन्त्री नियुक्त भएपछि जयशङ्कर पहिलो पटक नेपाल आउन लागेका हुन् । भदौ ४ द..
काठमाडौँ, १७ साउन। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग नेपालका लागि मोरक्को अधिराज्यका राजदूत मोहम्मद मल्लिकीले परराष्ट्र मन्त्रालयमा आज शिष्टाचार भेट गर्नुभयो । त्यस अवसरमा उहाँहरुबीच नेपाल–मोरक्को सम्बन्धका साथै पारस्परिकहित र चासोका विविध विषयमा विचारविमर्श भएको थियो । नेपालमा स्थायी सरकार गठन भएसँगै लगानीको वातावरण तयार ..
बुटवल, १८ असार । चीन भ्रमणमा रहनुभएका प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले चीनको सिचुवान प्रान्तका उच्च सरकारी अधिकारी तथा उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । भ्रमणका क्रममा मुख्यमन्त्री पोखरेल र सिचुवान प्रान्तका गभर्नर यीनलीले प्रदेश नं ५ र चीनको सिचुवान प्रान्तबीच मङ्गलबार भगिनी सम्बन्ध कायम गर्ने समझदारी..
काठमाडौँ, १४ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परराष्ट्र सम्बन्ध समग्र मुलुकको साझा सरोकारको विषय भएको चर्चा गर्दै राष्ट्रिय सहमति र समान अवधारणाका साथ परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मुलुकको परराष्ट्र नीतिका प्राथमिकताहरूलाई समयानुकूल समायोजन गर्ने र परराष्ट्र नीतिका मूलभूत विषयहरूमा देशभित्र साझा, व्यवहार..
काठमाडौँ, १ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शनिबार सम्पन्न युरोप भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नेपालको छवि उजिल्याउन सफल भएको छ । सरकार प्रमुखको तहमा भएको यो भ्रमणले प्रधानमन्त्री ओलीकै शब्दमा ‘नेपाल देखिने र सुनिने राष्ट्रका रुपमा राम्ररी स्थापित हुन पुगेको छ भने नेपालप्रतिको चासो र आकर्षण बढ्न गएको छ ।’ नेपालको विकासका..
काठमाडौँ, ३० जेठ । नेपाल र संयुक्त अधिराज्यबीच बेलायती गोर्खा सैनिकका विषयमा थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको टोलीको यही जेठ २७–२९ गतेको बेलायत भ्रमणका अवसरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र बेलायतको विदेश तथा राष्ट्रमण्डल मामिला राज्यमन्त्री जेरेमी हन्टले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै द..
प्रधानमन्त्री ओली बेलायत भ्रमणको दोस्रो दिन(फोटोफिचर)
काठमाडौ,२९ जेठ । युरोप भ्रमणका क्रममा बेलायतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बेलायती समकक्षी टेरिजा मे, लेबर पार्टीका नेता एवं विपक्षी नेता जेरेमी कोर्बेन, नेपाल हेर्ने संसदीय समितिका पदाधिकारीहरुसँग भेटवार्ता गरेका छन् । उनले ब्रिटिश राजकुमार ह्यारीसँग भेट गरे। भेटघाटमा उनले नेपालमा भूकम्पपछि सन् २०१६ मा पुनर्निर..
शान्तिको जग मानव मस्तिष्कमा नै बनाउनुपर्छ: प्रम ओली
काठमाडौँ, २८ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘जनताले नै प्रजातान्त्रिक मतको नेतृत्व गर्नुपर्ने, नेताले उनीहरुको कुरा सुन्नुपर्ने र प्रजातन्त्रको प्रतिरक्षा जनताको मस्तिष्कमा उनीहरुको मूल्य र जीवनमा निर्माण गर्नुपर्ने’ बताउनुभएको छ । अक्सफोर्ड युनियनमा ‘शान्ति, प्रजातन्त्र तथा विकास’ विषयमा व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री ओलील..
गोपाल खनाल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पूर्वविदेश सचिव सुब्रमण्यम जयशङ्करलाई जेठ १६ मा मन्त्री नियुक्त गरी जेठ १७ मा विदेश मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभयो । सन् २०१४ को चुनावभन्दा बढी शक्ति आर्जन गर्नुभएका मोदीले जयशङ्करलाई विदेशमन्त्री बनाउनुको अर्थ विदेश नीति र कूटनीतिमा उहाँको प्राथमिकता बुझ्न सकिन्छ । यसमा थप ..
सार्क बिम्स्टेकको विकल्प बन्दैन, सबै क्षेत्रीय सङ्गठनको सक्रियताका पक्षमा नेपाल
काठमाडौँ, १९ जेठ । सरकारले सार्क र बिम्स्टेक जस्ता क्षेत्रीय सङ्गठनको सक्रियताप्रतिको प्रतिबद्धता पुनः दोहो¥याएको छ । साथै उसले एउटा क्षेत्रीय सङ्गठन अर्कोको विकल्प कदापि नबन्ने नेपालको दृढ मान्यता पनि स्पष्ट गरेको छ । झण्डै साढे तीन दशकअघि देखि अस्तित्वमा रहेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) र २२ वर्षयता दक्षिण ..
काठमाडौँ, १७ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतिय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको सपथ कार्यक्रममा भाग लिएर स्वदेश फर्किनु भएको छ । बिहीबार नयाँ दिल्ली पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री ओली आज अपरान्ह स्वदेश फर्कनु भएको हो । उहालाई सभामुख कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलसहितका उच्च सरकारी अधिकारीले विमानस्थलमा स्वाग..
दार्चुला, १७ जेठ । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाका ब्यास गाउँपालिका–१ छाङ्गरु तिङ्करमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भएको छ । नेपाली सेनाको हेलिपटरमार्फत नेपाल प्रहरीलाई आज सो नाकामा पु¥याइएको हो । नेपाली सेनाको एम आई १७ हेलिकप्टरमार्फत सीतापुल प्रहरीचौकीमा प्रहरी पु¥याइएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी नायब निरीक्षक लोकेन..